Umagazini Design
Thola ukwakheka okuhle kwabaqambi emhlabeni jikelele.
Hlola ukwakheka okuhle
Thola imikhiqizo emisha yemikhiqizo yomhlaba.
Hlola imikhiqizo emisha
Thola amaphrojekthi amakhulu wokwakha kusuka kubaklami bomhlaba jikelele.
Hlola ukwakhiwa okuhle
Thola imidwebo yemfashini yokuqamba kusuka kubaqambi bemfashini bamazwe omhlaba.
Hlola ukwakheka kwemfashini yokudala
Thola ukwakheka kwemidwebo okukhulu kakhulu kunabaqambi behluzo bomhlaba wonke.
Hlola ukwakheka okuhle kakhulu kwemifanekiso
Thola amacebo amahle kakhulu kusuka kuma-ejensi womklamo womhlaba.
Hlola ukwakheka okuhle kakhulu kwamasu
Mgqibelo 24 Julayi 2021
Ikesi Lokuzinza Umhlangano kanye nama-disassembly enzelwe isisekelo sokuqina. Ngohlelo lwe-Innovative hinge isakhiwo olwakhiwe, amaphesenti angama-70 wezingxenye ancishisiwe, akukho glue noma i-rivet yokulungiswa, akukho ukuthungwa koxhumano lwangaphakathi, okwenza kube lula ukulungiswa, futhi kwehle namaphesenti angama-33 omthamo wezimpahla, ekugcineni, ukunweba ipotimende umjikelezo wokuphila. Zonke izingxenye zingathengwa ngawodwana, ngokwenza ngokwezifiso ipotimende lakho, noma ukushintshwa kwezinye izingxenye, akukho sutikheyisi elibuyayo yokulungisa isikhungo esidingekayo, konga isikhathi futhi kunciphise ukuthunyelwa kwe-carbon footprint.
Isihlalo Sangaphandle Sensimbi
Lwesihlanu 23 Julayi 2021
Isihlalo Sangaphandle Sensimbi Ngesikhathi sama-60s, abaklami abanombono bakha ifenisha yokuqala yepulasitiki. Ithalente labaqambi elihlanganiswe nokuguquguquka kwezinto laliholela ekuphimeni kwayo. Bobabili abaqambi nabathengi baba umlutha wako. Namuhla, siyazazi izingozi zako zemvelo. Noma kunjalo, izindawo zokudlela zasala zigcwele ngezihlalo zepulasitiki. Lokhu kungenxa yokuthi imakethe ayinikezeli okuhlukile. Umhlaba wokuqamba uhlala unabantu abaningi abakhiqizi befenisha yensimbi, noma kwesinye isikhathi ubhala kabusha imiklamo evela ngasekupheleni kwekhulu le-19… Nakhu ukuzalwa kukaTomeo: isitulo sensimbi sanamuhla, esikhanyayo nesimekayo.
Lwesine 22 Julayi 2021
Isikhala Sobuciko Lobu buciko, obujwayelekile kanye nokuthengisa konke kuhlangene endaweni eyodwa. Kusukela ukwakhiwa okuwumboni osebenza ezweni lokusetshenziswa kwendawo yokugqoka. Sonke isakhiwo sigcina ukuthungwa kodonga, njengokwakheka kwesikhala, kwakha umehluko ohlukile ngaphandle, kwakha nesipiliyoni sesikhala. Umhlobiso onzima we-Abandon, wasebenzisa umhlobiso othambile wesibonisi odale umuzwa wokuphumula. Umehluko phakathi kwesigaba sokuqala nesigaba sokuqala uvumelana nezimo ekuthuthukiseni indawo okukuyo ngokuzayo.
Lwesithathu 21 Julayi 2021
Ubunikazi Bomkhiqizo Ukwakha ukwakheka komkhiqizo we-Pride, iqembu lisebenzise ukufundwa kwezilaleli ezihlosiwe ngezindlela eziningi. Lapho iqembu lenza ukwakheka kwe-logo nobunikazi bebhizinisi, lalinaka imithetho ye-psycho-geometry - umthelela wamafomu wejometri ezinhlotsheni ezithile zabantu be-psycho-Ukukhetha kwabo. Futhi, ukwakheka kufanele ngabe kudala imizwa ethile phakathi kwezilaleli. Ukuze uzuze umphumela oyifunayo, iqembu lisebenzise imithetho yemiphumela yemibala kumuntu. ngokuvamile, umphumela ube nomthelela ekwakhiweni kwayo yonke imikhiqizo yenkampani.
Lwesibili 20 Julayi 2021
Isikhungo Sokuthengisa Isitayela saseChinese kuleli cala sisebenzisa itshe elimnyama lekhofi elibomvu emakethe kanye nokungagcwaliseki kokukhanya kwemvelo kwewindows floor, kwakha umehluko phakathi kokukhanya nomthunzi, okubonakalayo nokwangempela. Ama-grilles wezinkuni we-aluminium ne-aluminium, izingcezu zeqabunga lobuciko be-lotus endaweni ebabazekayo enamanzi, kanye nobuciko bokufakwa kwesakhiwo sezinhlamvu zaseChinese endaweni yokuphumula yiphuzu le- & quot; ink orchid enkantolo & quot; icala. Ikakhulu, ukusetshenziswa kwezinto ezintsha zengxibongo, kugqamile okwejwayelekile, kepha futhi ngobuhlakani kunciphisa izindleko zaphezulu.
Igumbi Lokugezela Lokugezela
Msombuluko 19 Julayi 2021
Igumbi Lokugezela Lokugezela Ukwehlukanisa endaweni evamile yokubukisa, sichaza lesi sikhala njengesendlalelo esingaqhakambisa ubuhle bempahla. Ngale ncazelo, sifuna ukudala isigaba lapho impahla ingazibonakalisa ngokwayo. Futhi sakha i-axis yesikhathi ukukhombisa umkhiqizo ngamunye okhombisa kule sikhala owenziwe kusukela ngesikhathi esingafani.
Siyawathanda amacebo wangempela nawokudala, ubuciko, izakhiwo, imfashini, ukwakheka kwehluzo, isu lokuqamba namasu amasha. Nsuku zonke, sikhetha futhi sishicilele imiklamo emihle ngabaqambi abanamakhono, abaculi bokudala, abaqambi bezakhiwo kanye nemikhiqizo emihle. Inhloso yethu ukudala ukwazisa komhlaba wonke kanye nokuqwashisa ngomklamo omuhle.
Bhalisa bese ulandela
Izithombe ezinhle kakhulu
Conspiracy - Sandal shaped jewels- Izicathulo Zokunethezeka Lwesihlanu 22 Okthoba
HandiShred Iphepha I-Shredder Lwesine 21 Okthoba
Gamsei I-Cocktail Bar Lwesithathu 20 Okthoba
Shicilela umklamo wakho
Ingabe ungumqambi, umdwebi, umklami wezakhiwo, umsunguli wezinto ezintsha noma umphathi wemikhiqizo? Ingabe unemiklamo emihle ongabelana ngayo? Sinesifiso esikhulu sokushicilela imiklamo yokuqala neyokuqamba kusuka kubaqambi, abaculi, abaqambi bezakhiwo, abasunguli kanye nemikhiqizo emhlabeni jikelele. Yenza imiklamo yakho ishicilelwe namhlanje.
Phakamisa ukwakhiwa kwakho
Okthoba 2021 (93)
Septhemba 2021 (90)
Agasti 2021 (93)
Julayi 2021 (93)
Design Ingxoxo kosuku Lwesihlanu 22 Okthoba
Design legend losuku Lwesine 21 Okthoba
Umklamo wosuku Lwesithathu 20 Okthoba
Umqambi wosuku Lwesibili 19 Okthoba
Iqembu lokuklama losuku Msombuluko 18 Okthoba
Ikesi Lokuzinza Isihlalo Sangaphandle Sensimbi Isikhala Sobuciko Ubunikazi Bomkhiqizo Isikhungo Sokuthengisa Igumbi Lokugezela Lokugezela
2021 Umagazini Design.